Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Gumaysiga Itoobiya Iyo Dhalinyaro Shaqo La’aanta Ah oo Iska Hor Imaad Dhaawac Gaystay Iskaga Horyimid.
Ciidanka Gumaysiga Itoobiya Iyo Dhalinyaro Shaqo La’aanta Ah oo Iska Hor Imaad Dhaawac Gaystay Iskaga Horyimid.
Gumaysiga Itoobiya ayaa baryahan waxaa soo foodsaartay cabsi wayn oo kusaabsan tirada iyo tayada ciidanka qalabka sida oo hoos udhacday. Waxay wararka Addiss Ababa naga soogaadhaya tibaaxayaan in tirada Ciidanka Gumaysiga Itoobiya ay hoos udhacday sanadihii lasoo dhaafay. Hoos udhacan kuyimid ciidanka Gumaysiga ayaa salka kuhaya dagaalo ba’an oo guud ahaan wadanka ay kawadaan xoogaga hubaysan ee kasoo horjeeda cadaadiska iyo cabudhinta ciidanka wayaanuhu ay shucuubta ku hoos nool kuhayaan.
Waxay bilaabeen taliska ciidanka Itoobiya ineey sooraafaan dhalinyarada mustaqbal la’aanta ah ee jahawareerka iyo mugdiga kujira kuwaasoon haysanin wax naruuro ah oo nolosha mustaqbalkooda kusaabsan, sidaas darteed ayay ciidanka Itoobiya waxay dhalinyarada ku wargaliyeen in shaqooyin looga helay qaar kamid ah wadamada carbeed. Kadib markay dhalinyaradii xogtaas heleen ayay imaadeen meelihii lagu balamiyay balse waxaysan filaynin ayay kala kulmeen.
Waxay wararku intaas kudarayaan in dhalinyaradan loo qafaashay xeryaha tababarka ciidamada Itoobiya oo qasab lagu geeyay kadibna halkaas uu iska hor imaad balaadhan kudhexmaray dhalinyaradii gadooday iyo ciidanka Gumaysiga. Iska hor imaadkan ayaa dhaawac farabadan kasoo gaadhay dhalinyaradii meesha qaar kamid ahaa dhalinyarada ay ku guulaysteen ineey gacanta cadawga ka baxsadaan.
Waxaan shaki kujirin in awoodii ciidanka Itoobiya hoos udhacday mar haday maanta xaajadu marayso in dhalinyaro shaqo la’aan ah lagu qasbayo ineey xoog ciidan ooga mid noqdaan. waxaase iswaydiin mudan mustaqbalka uu yeelan doono ciidan mooraal ahaan iyo tayo ahaanba heeraas maanta maraya intee in le’eg buu siijiri karaa?